Hormuud News Friday, April 27th, 2018 | 08:37
[Wednesday, April 4th, 18] :: Sahra Axmed Jaamac oo Hargeysa ku geeriyootay
Muqdisho (RH) Allaha u naxariisto waxaa maanta oo Arbaca ah Isbitaal ku yaalla magaalada Hargeysa ku geeriyootay fannaanada Soomaaliyeed ee Sahra Axmed Jaamac, sida BBC-da u xaqiijiyey Abwaan Maxamed Aadan Dacar.
Sahra in muddo ah ayey ku xanuunsaneed magaalada Hargeysa.
“Sahra Axmed Jaamac waxa ay ahayd innan qaali ah oo carruur badan korisay oo qalbi jilicsan, lixdankii ayey fanka ku soo biirtay illaa waqtigaasna ka mid bay ahayd, oo qof dhaqanka Somalia ku caan ahaa ayey ahayd”ayuu yiri Abwaan Maxamed Aadan Dacar oo ay soo wadashaqeeyeeN.
Waxa ay ka mid ahayd fannaaniinta hobollada Waaberi ee hoggaanka u ahaa fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed.
Sahra Axmed waxay ku dhalatey meel u dhow magaalada Burco ee gobolka Togdheer.
Sahra Axmed waxay leedahay tiro badan oo heeso ah, kuwaasi oo iskugu jira waddani, jacayl, guubaabin, dhiirigelin, haasaawe, amaan, duco, wacyi, wargelin iyo wax-sheeg